Ukuphupha ngokudibana ▷ ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Amaphupha anomxholo wesondo aqhelekanga kutoliko lwamaphupha. Nangona kunjalo, ukubakho kolu hlobo lwamaphupha akunakunxulunyaniswa neemeko ezithile zobomi okanye iimeko. Inzululwazi ayiyazi into ebangela ukuba umntu acinge ngesondo okanye ngesondo.
Iziganeko zosuku zenziwa ngamaphupha. Oku akuthethi ukuba kuphela ngabantu ababelana ngesondo kuphela abanamaphupha amdaka, kodwa kuxhomekeke kubuninzi beengcinga zesondo. Kuba ukuba sele uzonwabisile ngeengcinga ezinje emini, iphupha lokuchama linokubonakala ngelixa ulele.
1 Uphawu lwephupha «ejaculate» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ejaculate» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ejaculate» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ejaculate» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha ubona kwisimboli yephupha "ejaculate" uphawu olubonakalayo lomnqweno wephupha lokulawula imeko yalo engalunganga yeemvakalelo. Ufuna endala uloyiko y Amathandabuzo Shiya ngasemva kwaye uqhubekeke neemvakalelo zakho zengcinezelo.
Ukuphuma emzimbeni njengophawu lwephupha kungabonisa ukuba iphupha elo linqwenela ukuphumla kulo el mundo ukuvuka okanye ufuna ukwanelisa iimfuno zabo zesondo. Olunye utoliko lutolika uphawu "lwe-ejaculate" njengophawu lomntu. isigqibo kunye nokuvuthwa komzimba, ngakumbi xa indoda iphupha ngolu phawu lwephupha.
Ngokubanzi kuthathelwa ingqalelo, umahluko ukwenziwa ekutolikeni iphupha lokuphuma nokuba livela ephupheni ngokwalo okanye komnye umntu. Ukuba iphupha libona ukunyuka kwakho ephupheni emva kwamava ezesondo, unokucinga ngolonwabo kunye nolwaneliseko. ulwalamano kwihlabathi elivukayo.
Nangona kunjalo, ukuba ukuchama njengophawu lwephupha kuvela komnye umntu, umphuphi kufuneka aqonde ukuba akanelisekanga ngumbutho wakhe kwaye akonwabi kwaphela. Ukuba iphupha alidibani, isimboli yephupha inokuthi kule meko ibonise ukulangazelela kwakho unxibelelwano olonwabileyo.
Uphawu lwephupha «ejaculate» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwindawo yokujonga kwengqondo, uphawu lwephupha "ejaculate" inokuba ngu isimboli yamandla ezesondo ngakumbi ukuba indoda iyaphupha. Umntu ophuphayo kufuneka azi ukuba unamandla obudoda kwihlabathi lokuvuka, elihamba nomtsalane omkhulu wesini sabasetyhini.
Olunye utoliko lweli phupha lwengqondo luthi uphawu lwephupha "ejaculate" lumele ukushiywa kwezinto ezoyikekayo ezihleli nzulu. Ukuba olu phawu lubonakala ephupheni, kuya kufuneka uqale ngenkqubo yokulibaziseka ende kwaye ujongane neemvakalelo zakho, kude kube ngoku kuvaliwe. Mhlawumbi umphuphi kufuneka aphethukele kuncedo lweengcali zangaphandle kwihlabathi eliphaphamayo ukuba akakwazi ukumelana neengxaki zakhe eyedwa.
Uphawu lwephupha «ejaculate» - ukutolika kokomoya
Inqanaba lokomoya lokuchazwa kwephupha litolika uphawu lwephupha "ejaculate" njengophawu lwakho. ukuphelelwa ngamandla okomoya.